Wakaaladda Biyaha Biyaha Uureysa CW-05 soosaarayaasha iyo alaableyda | Biyaha nadiifka ah
Qaybaha ugu muhiimsan: Dicyandiamide Formaldehyde Dheecaanka
Muuqaalka: Liquid midab leh ama midab khafiif ah
Viscosity-ka Dynamic (mpa.s, 20 ° C): 10-500
pH (30% xalka biyaha): <3
Mawduuc adag% ≥: 50
Badeecadani waa quaterter ammonium cationic polymer.
1. Waxaa badanaa loo isticmaalaa daaweynta biyaha qashinka ah ee dharka, daabacaadda, midabaynta, samaynta waraaqaha, macdanta, khad iwm.
2. Waxaa loo isticmaali karaa daaweynta ka saarida midabka ee biyaha wasakhda midabkeedu sareeyo ee dhirta dheeha. Waxay ku habboon tahay in lagu daaweeyo biyaha qashinka leh firfircoonaan, aashitada iyo kala firdhinta dheehyada.
3. Waxa kale oo loo isticmaali karaa habka wax soo saarka ee warqadda & saxarka ah wakiilka haynta.
1. Is qurxinta adag
2. Awoodda ka saarista COD ee ka wanaagsan
3. Dareemid dhakhso leh, qulqulatid wanaagsan
4.Aan wasakhda ahayn(malaha aluminium, koloriin, ion bir culus iwm)
Dicyandiamide Formaldehyde Dheecaanka
Liquid midab leh ama midab khafiif ah
Viscosity-ka Dynamic (mpa.s, 20 ° C)
pH (30% xalka biyaha)
Mawduuc adag% ≥
1. Shayga waa in lagu qasi karaa 10-40 jeer oo biyo ah ka dibna si toos ah qashinka loogu shubayaa. Ka dib markii la isku qasan yahay dhowr daqiiqo, waa la soo deyn karaa ama hawo ayaa la sabayn karaa si ay u noqdaan biyo nadiif ah.
2. Qiimaha pH ee biyaha qashinka waa in lagu hagaajiyaa 7.5-9 natiijo wanaagsan.
3. Marka midabbada iyo CODcr ay aad u sarreeyaan, waxaa loo isticmaali karaa maadada loo yaqaan 'Polyalium Chloride', laakiin iskuma darka. Tan dhexdeeda Jidka, kharashka daaweynta wuu ka yaraan karaa. Haddii Polyalium Chloride loo isticmaalo hore ama ka dib waxay kuxirantahay baaritaanka ubaxyada iyo habka daaweynta.
1.Xirmada: 30kg, 250kg, 1250kg taangiga IBC iyo 25000kg flexibag
Keydinta: Waa wax aan dhib lahayn, aan ololi karin oo aan qarxin, qorraxda laguma dhejin karo.
Wax soo saarkani wuxuu u muuqan doonaa lakab ka dib kaydinta muddada-dheer, laakiin saameyntu ma saameyn doonto ka dib sirring.
Heer kulka: 5-30 ° C.
5.Shelf Life: Hal Sano
Xiga: Wakiilka Biyaha Sifeeya CW-08
Wakiilka Bakteeriyada Anaerobic
Wakiilka Dayactirka ee Formaldehyde-QTF-6
Bakteeriyada hoos u dhigta COD